အဘယ်သို့ငါဒီအကြောင်းကျွန်မရဲ့မိဘတွေစကားပြောသလဲ? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ် ဦး ဦး နှင့်သင်ပြန်လည် reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းသင်ကြုံတွေ့ရသည့်အရာများအကြောင်းပြောဆိုရန်အမှန်တကယ်ကူညီနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်မိဘများ။ သူ့ဖခင်တစ်ယောက်ကသူသားနဲ့စကားပြောဖို့ပြောနေတာ။
ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါများ၏ဆိုးကျိုးများကိုခံစားနေရပြီး PMO ပြန်လည်နာလန်ထူရန် ၈ ပတ်မပြည့်သေးပါ။ ငါ့ရဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ်သားလေးရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုမကြာသေးမီကငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူ့ဆီကနေကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသူသည်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အင်တာနက် porn အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူသည်အွန်လိုင်း porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်၏အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ခြင်းအားနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ - ဒါက ၁၇/၁၈ အရွယ်ဖြစ်တယ်။ သူကပုံမှန်စိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ဖူးလား (သားလေးကိုကြိုတင်စိတ်ပူထားပေမယ့်အရမ်းကိုလွယ်ကူပြီးလွယ်လွယ်ကူကူစကားပြောလို့ရမလား) လို့သားကိုမေးခဲ့တယ်။
သူဟာသူ့ဘဝမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခုသာရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သူကဒီအကြောင်းကိုသူ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့အားလုံးရယ်ကြတယ်။ သူတို့ရယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်သူမှအိပ်မက်မမက်ဖူးဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်း - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှု၏ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို၎င်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ညွှန်ပြချက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ထိတွေ့မှုပိုမိုလိုအပ်သည့်ရှင်းလင်းသောအချိန်ဗုံးဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းသည်သူ၏မိဘများကိုပြောပြသည် - နှင့်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှု (အံ့သြဖွယ်, ရွေ့လျားပုံပြင်)
ကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်အမြဲတမ်းအထောက်အကူပြုမိဘများဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားပြောပြရန်ကြောက်လန့်ပြီးသံသယရှိခဲ့သည်။ ဒီကနေ့မှာကျွန်တော့်အဖေကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာတွေ့ဖို့ပြောပြီးညစ်ညမ်းမှုနဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူက“ မင်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူး၊ ငါနဲ့အတူငါနဲ့အတူရှိနေတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤအပယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါအပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအတူတကွစုစည်းပြီးပိုကောင်းတဲ့၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ဘ ၀ အတွက်ရိုက်ကူးပါ။ ” ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးခံစားရပြီးအခုတော့ငါ့အဖေကဒီအကြောင်းကိုသိပြီ၊ ငါဒါကို ၂၀၀% လောက်အားစိုက်ထုတ်လိုက်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်ဒီစွဲလမ်းမှုကိုငါ့ဘဝထဲကထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အတူအံ့သြစရာအကောင်းဆုံးစကားပြောဆိုမှုလေးပဲရှိခဲ့ပါတယ် ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအခြေခံအားဖြင့် ၀ န်ချတောင်းပန်ပြီးသူ့ကွန်ပျူတာထဲမှာစကားဝှက်တစ်ခုထည့်ခိုင်းတာပါ။ ငါလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ K9 နဲ့သူကဘာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမေးတယ်၊ သူကငါ့ကိုအဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ချင်တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် ၁၀၀% ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သည်ဟု 100% ယုံကြည်မှုရှိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးကြောင့်!
သူ့တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်အံ့သြသွားသည်။ သူနားလည်ထားတာအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါသူက“ ဟုတ်တယ်၊ ငါတစ်ခါတလေညစ်ညမ်းတာကိုကြည့်ရတာအမှန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါမကြီးပြင်းဘူး” လို့တောင်ပြောခဲ့တယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသည်ကဲ့သို့! လူမှုရေးဘဝကသိပ်မကြီးဘူး (ဒီအကြောင်းကိုငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးသိခဲ့ပေမဲ့) ဒီထက်ပိုပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာရဲ့အန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးလို့လည်းရှင်းပြခဲ့တယ်။
ငါအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် - ငါမိန်းမတွေကိုဘယ်လောက်အထိငါဂရုစိုက်တယ်၊ အမျိုးသမီးများကကျွန်ုပ်အားမျက်လုံးချင်းဆုံသည့်အခါသို့မဟုတ်ပရောပရည်လုပ်နေသောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့စိုးရိမ်စိတ်ရှိကြောင်း၊ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုမှားတယ်လို့ငါတကယ်ထင်ခဲ့တာ - ငါလိင်တူချစ်သူလား။ ငါ testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေသလား။ ငါဟာအားနည်းနေတဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်လား ... ဒီအတွေးတွေကမပျော်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအခုစိတ်အေးဆေးစွာနေရပြီးကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ဟာ ၁၀၀% ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ငါသူ့ကိုစကားပြောဖို့အခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုခဏကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့အဲဒါပြီးသွားပြီ၊ ငါအရမ်းစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။ ငါ့မှာနံနက်သစ်သားမရှိဘူးလို့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါသူအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကဆေးပညာကိုလေ့လာခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါသူအံ့အားသင့်သွားတယ်။
ပြီးတော့သူတို့ကအမျိုးသားတွေဟာခံစားချက်တွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ မင်းတို့မင်းတို့ကငါတို့ဆီကအကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကိုသင်ယူနိုင်တယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော့်အမေကဘာကြောင့်ငါမှာရည်းစားမရှိသေးတာလဲလို့သူငြင်းလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုသူနားလည်ပြီ။ ငါမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် YBOP ကိုရှာပြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာဖတ်နေသလိုပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်မင်းကသူ့မိဘတွေနဲ့အတူအိမ်မှာနေပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်အားလုံးအားဖြင့်သူတို့ကိုပြောပြ! သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်အမေကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းပြောပြပြီးသူကကျွန်မကိုလက်ခံခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရေးချင်တာကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေပဲ။ ငါနောက်ဆုံးသုံးရက်အတွင်းတကယ်ခိုင်မာတဲ့တပ်မက်ခြင်းရှိခြင်းခဲ့သည်။ ကိုယ့်အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ထက်ပိုမိုအားကောင်း။ ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလကငါ့ကိုငါ့ကိုအရင်ချိုးဖောက်တဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးအားနည်းနေတာကိုဆိုလိုတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အမေကိုပြောပြီးကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2qi36k/told_my_mom_about_my_porn_addiction_looking_for/
ငါက ၁၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ မင်းကဒီခေတ်မှာနာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူဖြစ်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်ထားတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နောက် ၈ လအကြာမှာ NoFap ကိုကျွန်တော်သိပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရောက်နေပါပြီ မဟုတ် ကလုပ်နေတာ။ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကအများကြီးငါအချို့လူတွေပြောကြောင့်ထိုအရပ်မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်လွန်းနေသောကြောင့် NoFap လုပ်နေတာ။
ကျွန်မအမေကိုမှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းငါ့ဆန္ဒပေါ်မှာငါ့ကိုချီးမွမ်းနှင့်သူမလည်းသူမတတျနိုငျသစေလိုကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာစတင်ခဲ့နှင့်နောက်ဆုံးမှာငါ NoFap အကြောင်းကိုသူမ၏သို့ပြောသည်။
သူမသည်သူမတစ်ဦးအကျဉ်းခဏစကားများဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်ပြီးတော့ထောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည် .. နည်းနည်းကျနော်တို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအသောက်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်တိုးတက်အောင်အကြောင်းကိုစကားပြောကတည်းကဒါဟာနှင့်အတူကိုယ်ရံတော်ကိုချွတ်ဖမ်းမိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်မိဘတွေကိုဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ငါနည်းနည်းတုန်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါလုပ်တာကို glad ၀ မ်းသာတယ်
ငါကျည်ဆံ bit, ငါငါ၏အစွဲအကြောင်းကိုငါ့အဘကိုပြောသည်။ ထိုအခါငါကသူယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ့ကိုပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါ့အသက်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးသူတွေကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုပြောရန်ရှိသည်။
ကျွန်တော့်အမေကိုပြောခဲ့တယ်။ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲအကြောင်းကို။ ထိုမိန်းမသည်ဝမ်းမြောက်စွာငါ၏အလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်နားလည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကြောင့် shit ကနေညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ထံသို့ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပေး၏။ ငါ့ Laptop အပေါ် fuck ဆိုတဲ့ K9 blocker တယ်ငါ fuck ဆိုတဲ့ငါ 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့သူငယ်လေးများ Going !!!
Edit: ငါသည်ငါ့အစာအိမ်အတွက်စာသားမပါလိပ်ပြာနဲ့တူ, ဒီပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုသူမ၏ပြောပြရန်အကြီးအကျယ်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကဆိုးရွားသည့်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် YBOP နှင့်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုအကြောင်းအမေကိုပြောပြခဲ့သည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသံကငါ့စိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကြားသိခဲ့ရတယ်။ အစပိုင်းတွင်သူမ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ“ သင်နောက်နေတာလား၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်အလွန်ကောင်းသည်” ဖြစ်သည်။
ငါသူကိုမြင်လျှင်သည်အထိငါကအကြောင်းသူမ၏စကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူမကိုပြောပြခဲ့သည် TedX ကဗီဒီယို။ သူမမြင်တော့သူနားလည်လိုက်သည်။ သူမသည်အတူတူအပိုင်းပိုင်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါ။ ပြီးတော့သူမကကျွန်တော့်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်။
ထို့နောက်တစ်နာရီခန့်မျှထပ်မံပြောဆိုကြ ဦး မည်။ ငါ, အဆိုးရွားဆုံးသောအမျိုးအစားများကိုငါမည်သို့တိုးပွားစေခဲ့သည်ကို ED, HOCD အကြောင်းသူမ၏ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ ငါ nofap / noporn ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းကျိုးများကိုသူမ၏ပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကုသခဲ့သနည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများမရှိခဲ့ပုံ၊ ကျွန်ုပ် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားခဲ့ရပုံနှင့်အမှန်တကယ်ထွက်ခွာသွားပြီးချိုများဖြင့်ဘဝကိုရယူနိုင်ရန်စွမ်းအင်၊ ဒါဟာတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ သူမသည်နေဆဲရုန်းကန်နားလည်, ဒီတစ်ခုစွဲကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိ။ သို့သော်သူမထောက်ခံသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်အရေးပါသည်။
ငါ PMO နှင့်ငါ့ပြproblemနာအကြောင်းကိုငါ့မိဘများကိုပြောသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်မဖြစ်သင့်သော်လည်း၎င်းသည်သင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပြောပြရမည်။ မစားရင်တော့အပြင်ထွက်စားမယ်။ ငါ့ရဲ့ PC မှာ k9 ဝဘ်ကာကွယ်မှုကို install လုပ်ပြီးစကားဝှက်ကိုမပြောဘဲအဖေကကျွန်တော့်ကိုကူညီခဲ့တယ်။ NoFap မှာသင် EVER မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားပါ။ (သင်ကိုယ်တိုင် set up လုပ်ပြီးစကားဝှက်ကိုဝှက်ထားပါ) ။ ၎င်းသည်သင်၏ပုံစံကိုအနှောက်အယှက်ပေးပြီးသင်တစ်နေရာရာသို့သွားနိုင်လျှင်တောင်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော့်မိဘတွေကအဲဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ထပ်ဆင့်သတိပေးချက်ကအဲဒါကိုဆက်ပြီးစွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ Porn မရှိရင်တစ်နှစ်တာ မှစ. သင်ခန်းစာများ
ကောင်းပြီ၊ ငါတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေကြောင်းစာပို့ခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမပြောပြသည်အထိသူမထွက်ခွာရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါအချိန်ယူပြီးသူမ၏brainonporn.comကိုပြသခဲ့သည်။ ငါ့ပြproblemsနာများနှင့်ငါ့ reboot အကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ငါ့အမေနားလည်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး သို့သော်သူမကမည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျှမရှိဘဲနားထောင်လိုစိတ်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါစွဲလမ်းဟူသောစကားလုံးကိုပင်မသုံးခဲ့ဘူး။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင်မိန်းကလေးများအပေါ်သင်တုံ့ပြန်ပုံကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပုံအကြောင်းပြောပြသည်။ အဆိုပါစွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ပြproblemနာမဟုတ်; အကျိုးသက်ရောက်မှုများ သုံးလနီးပါးမှာညစ်ညမ်းမှုကင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာကိုမလိုချင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်)၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သည် (ED, no arousal) အစစ်အမှန်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်) ။
ငါ porn သည်လိင်တူချစ်သူကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်ပုံစံများကိုများသောအားဖြင့်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ငါအဲဒီလောက်ဝေးဝေးမသွားဘူးလို့ပြောတယ်။ အဲဒါတောင်မှမသင့်တော်ပါဘူး
သူမသည်သူ့ကိုယ်သူ၏ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောသည်။ သူမသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအချို့စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ဦးအတွင်းရေးမှုးကြီးနှင့်တဦးတည်းအချိန်ဟာလူနာအမှန်တကယ်လည်ပင်းညှစ်သတ်လိင်သို့လေနောက်ဆုံးမှာကနေသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့်သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါငါသူမ၏ချွတ်ကူးလကျထကျနဲ့ငါ့အဖြူရောင်ဘုတ်ပေါ်တွင် matrix ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာသူမ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပြရန်ထူးဆန်းတဲ့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်သူမတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။ သူမသည်သူကဒီလိုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုသတ္တိထင်နှင့်သူမကိုယ်ကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးပွေ့ဖက် shared ။
ငါသူမရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတကယ်ပြင်ဆင်လို့မရတဲ့အတွက်တော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော့်ခြေထောက်ဒဏ်ရာကအချည်းနှီးမဖြစ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကသူမကိုဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုသွယ်ဝိုက်ပြောပြစေတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခု - ငါကသူနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သူကမှန်းဆချက်ကိုအရင်ဆုံးယူလိမ့်မယ်၊ ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုမေးပါ။
မင်းရဲ့အကြောင်းကိုမင်းအမေနဲ့ဘယ်လိုဝေမျှခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါဖတ်တဲ့အခါငါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်လှ။ ဒါဟာအရမ်းရဲရင့်တယ်၊ သူမဟာသင့်ရဲ့ရိုးသားမှုကိုဒီလောက်ပုဂ္ဂလိကနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဝေမျှပေးတာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏အသင်းကိုအထောက်အကူပြုသော၊ မေတ္တာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းပေးပြီး၊ ငါအမေနှင့်အတူဤမျှဝေနိုင်ခြင်းရှိမရှိငါတွေးမိ။ ငါ့အဖေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် သူကသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အမေ၊ ကျွန်တော်မသိပါဘူး မင်းရဲ့မေမေနဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တာလဲ။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများသည်၎င်းတို့အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်းကိုလည်းသိပြီး၎င်းသည်သင်၏စိတ်ခံစားချက်များနှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏အဖေအားပြောပြရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါကဖြစ်နိုင်သည်။ သူ့ကိုဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။ ဒါကငါလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျပဲ၊ yourbrainonporn.com ကိုမင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မင်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြမယ်။
ပြင်းထန်မှုအကြောင်းချက်ချင်းပြောပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သာမန် porn အသုံးပြုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်သားများအတွက်မည်မျှရှိသည်ကိုပြောပြရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးများအားသင်တုန့်ပြန်ပုံကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးသည်ဟုသင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီဟုပြောပါ။ အမေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့တာကတကယ်တော့သူကကျွန်မကိုကုသမှုခံယူနေရတဲ့အတွက်သူမစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ထိုအခါငါသူမ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြသခဲ့သည်။
အမေကတစ်ခါတလေကျွန်တော့်အမေကိုပြောဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူနားမလည်ဘူးဆိုတာမသေချာဘူး။ ဆွေးနွေးမှုများတွင်သူသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများရှိသူများကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။ သူမဤအရာကိုနည်းနည်းလေးမှနားလည်မယ်မသေချာဘူး ဒါပေမယ့်မင်းတို့အမေနဲ့အတူငါတို့လိုအများကြီးဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဟားဟား၊ မင်းကလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုမင်းစွဲလမ်းတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မိသားစုကငါဟာသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မည်မျှဖြောင့်မတ်ကြောင်းကိုမြင်နိုင်ပါက!
ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကြောင်းကိုမိဘများအားပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အဖေကသိပ်နားမလည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုယုံကြည်တယ် (သူက ၆၁ နှစ်ရှိပြီးအင်တာနက်ကိုမုန်းတယ်) ။ အမေနားလည်ပါပြီ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့မဆိုးပါဘူး၊ မိဘတွေကသူတို့မှာအကြံအစည်ရှိနှင့်ပြီးသားလို့ပြောကြတယ်။ ထိုအခါငါသူတို့တုံ့ပြန်မှုမှာအံ့သြသွားတယ်။ ငါသူတို့ယုံကြည်မှုကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့မျှော်လင့်ရတယ်။
မနေ့ကငါငါ့အစွဲနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့အဘအားပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့အသံကျယ်ကျယ်နဲ့“ ငါကစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ငါ reboot လုပ်နေတယ်” လို့အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ပြောဖို့စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။
အခုဆိုရင်သင်တို့အများစုဟာဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေမနေဆိုတာကိုတော့ငါမသိပေမယ့်တာ ၀ န်ခံမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ယောက်ရှိခြင်းအားဖြင့်ငါအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါဟာတာ ၀ န်ခံမှုဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုသင်စိတ်ပျက်စရာဘယ်တော့မှမလုပ်နိူင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပေးလိုပါတယ် ကျွန်တော့်အမေကအမေပဲ။ ဒါမှန်တယ် ... ငါဒီကိစ္စကိုပြောပြတယ် ဒါဟာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတစ်နေ့တာအတွင်းမှာငါ porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်ဆိုတာကိုအမေကိုမပြောပြချင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့တုန်းကအဲဒီလိုပဲတကယ်ယုံကြည်တယ်။
ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာအကြောင်းပြောဆိုရန်အလွန်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ငါဆဲကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်းဒီစွဲလမ်း၏ရှိနေသော်လည်းခြွင်းချက်မရှိငါ့ကိုခစျြသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကရှိခဲ့သည်ကိုမသိ။ သူမသည်တောင်းဆိုနှင့်ငါ့တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်နေ့စဉ်စာပို့အကြောင်းကိုအလွန်ကောင်းသည်။ ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကပထမဦးဆုံးလတစ်လငါ 8 လကြာ porn-အခမဲ့ပါပြီအတွက်တဦးတည်း relapse နှစ်လပြီးနောက်! ငရဲခဲ့သည်။
လပေါင်းများစွာကြာအောင်မအောင်မြင်ပြီးနောက် ၆ လအကြာကဒီအကြောင်းကျွန်တော့်အမေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏နာကျင်မှုကိုခံစား။ နားလည်နိုင်သောကြောင့်သူမစတင်ငိုခဲ့သည်။ ငါ့အဖေလည်းသူတို့ကိုငါစွဲလမ်းအကြောင်းကိုသူတို့ကိုပြောပြသောကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးဖြစ်သည့်အကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက် PMO မပါပဲ ၄၂ ရက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှုကင်းဝေးသည်ဟုထင်ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤအရှည်ဆုံးအရှည်ကိုချိုးခြင်းအားဖြင့်ဤတစ်ကြိမ်တွင်လွတ်မြောက်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။ ကံကောင်းပါစေ။
ကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည် (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) ။ ကျွန်တော်အဖေကိုပြောခဲ့တယ် အများအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ရုန်းကန်မှုများသည်သူနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အမေကကျွန်ုပ်အသက် ၉ နှစ်အရွယ်မှာမိသားစုကိုထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ညမှာသူမအသည်းကွဲ VCR မြေအောက်ခန်းထဲမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးသူမပြီးဆုံးသေးတဲ့ရုပ်ရှင်လို့ထင်ပြီးပြဇာတ်ကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ ညစ်ပတ်တယ်
ကျွန်မငယ်ရွယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့မိသားစုအပေါ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်စသည်တို့ကို, ရှက်ကိုထိခိုက်စေ, သူသည်ရက်အနည်းငယ် (သူမတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးဟာအစဉ်အဆက်ထက် သာ. ကောင်း၏) အတွက်လွန်ပါသွားခဲ့ပါသည်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသိခငျြ, ဒါပေမယ့်ငါသကဲ့သို့ငါ၏စွဲဖို့ PMO မှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ထင်ခဲ့သည် ကျွန်မအသက်ကြီးလာရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါသူလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေအတွက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသူ့ကိုကန်ရတာဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာကိုငါပြောခဲ့တယ်။ ယုံကြည်ခြင်း (စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း) ရှိခြင်းကလူတို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကိုပြသသင့်သည်။ သူတို့ကိုသင်ဝေမျှနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ၎င်းသည်အလွန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အားလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အခြားလူများကကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိုသည့်အဖေရှိသည်။ ငါရူးနေပြီဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုကူညီမယ်လို့ပြောတယ် သူကကျွန်တော့်ကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကဒီပစ္စည်းတွေဆိုးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနားမထောင်ခဲ့ဘူး နောက်ဆုံးသူပြောတာကိုသဘောပေါက်ပြီးနုတ်ထွက်လိုက်တာကိုသူပျော်ရွှင်တယ်လို့ထင်တယ်
နောက်ခံအချက်အလက်အချို့ - ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိဘများနှင့်အတူနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လာမည့်အပတ်မှစပြီးဇန်နဝါရီလအထိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်း, စိတ်မဝင်စားလျှင် skip:
ငါ PMO စွဲနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ပြီးပြီ XNUMX နှစ်။ ဒီနေ့တော့အမေ့ကိုပြောပြဖို့သတ္တိရှိလာပြီ။
ငါ porn ကိုစကြည့်ကတည်းက, ငါ့လူမှုရေးဘဝ shit ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မူလနှစ်မူလတန်းမတိုင်မီလေးတွင်အခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါ့အိမ်အသစ်မှာကလေးမရှိဘူး။ ငါ့ဟောင်းကျောင်းမှာသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းငါ့ကျောင်းအသစ်ကိုသိပ်ပြီးမတော်ဝင်ဘူး။ ဒီအချိန်လောက်မှာငါစပြီး porn ကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ (၆) နှစ်လောက်မြန်မြန်ရှေ့ဆက်ပြီးအထက်တန်းအောင်တော့မယ်။ (ငါကဒတ်ခ်ျလူမျိုးပါ။ ငါတို့တန်းစနစ်ကမင်းနဲ့မတူတော့ဘူး) ။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျတဲ့၊ လူမှုရေးမကောင်းတဲ့လူမှုရေးအရမလုံလောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုရှိလားဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒါဟာတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ငါ Asperger's syndrome ရောဂါဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ် ပို၍ အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်မမှန်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ငါဟာလိင်အကျင့်စွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပဲရှိပါပြီ။ အခုငါအရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့လူမှုရေးဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုအရငါဟာငါ့ဘဝမှာအရင်ကထက်အားနည်းနေတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟာအထက်တန်းကျောင်းကအမြဲတမ်းထူးဆန်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်အမြဲထင်မြင်ခံခဲ့ရပြီးအစောပိုင်းနှစ်တွေတုန်းကအရုပ်ဆိုးတာကိုမကြာခဏခံခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကမှဆိုးရွားလှတဲ့ cystic ဝက်ခြံကိုရရှိခဲ့ပြီးအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးနောက် Acutane ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူကငါ့ရဲ့ဝက်ခြံတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။
ငါ accutane ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကရပ်တန့်လိုက်ပြီး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုပိုပြီးသတိပြုမိစေတယ်။ အထူးသဖြင့်ငါထွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းငါ့အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာသေး။ ကျွန်မမှာရည်းစားမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါ့ဘဝမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသာနမ်းခဲ့တယ်။ ငါရှက်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့လူမှုရေးဘဝဟာကံကောင်းတာကအရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်းပေမယ့်ငါဖြစ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်သည်သာတည်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ အမေကတစ်ခုခုမှားနေတာ၊ ငါစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိလာတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကငါ့ကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့မေးတိုင်းအချိန်တိုင်းငါဘယ်သူ့ကိုမှမဖွင့်လို့မရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီဟာကပိုဆိုးစေတယ်ဘာကိုမှန်းလဲ။ လူတွေကိုသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တာကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့လည်းပိတ်ပစ်ဖို့နဲ့ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်သင်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအားလပ်ရက်၌၊ ကျွန်ုပ်သည်အရည်ပျော်ကျခြင်းနည်းနည်းစတင်ခဲ့သည့်အချိန်တွင်လာပါ။ ငါအမေတွေအများကြီးအကြောင်းပြောပေမယ့်ငါ PMO အကြောင်းကိုတိတိကျကျမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါ့မှာအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရှိတယ်လို့သူ့ကိုပြောတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်) အဝေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြန်လှည့်လိုက်မိသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စိတ်ပျက်သဖြင့်၊ ဒီဟာကနောက်ဆုံးညဖြစ်တယ် ထို့နောက်သူသည်အလွန်စိတ်သောကရောက်ပြီးအမှန်တရားကိုသိရှိလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူ့ကိုပြောပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစွာစားသုံးခြင်းက ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပြissuesနာများနှင့် shebang တစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ ဦး တည်သည်ကို၎င်း။ ဒီအကြောင်းကိုသူမကိုပြောပြပြီးပြသခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသူမ၏လက်ပတ်နာရီကို Gary Wilson ကရဲ့ Great Porn စမ်းသပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူမနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံနားလည်လိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ငါပြောရမယ်ဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်တာကထင်သလောက်မခက်ဘူး။ ငါကအရမ်းပွင့်လင်းစိတ်မိခင်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းတယ်။ သူမသည်အလွန်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးအမှန်တကယ်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသိရသောအခါ“ ပျော်ရွှင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များနှင့်ရှက်စရာအလေ့အထအကြောင်းအမေအားပြောပြရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်နေခြင်းထက်ပိုဆိုးသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကုသခြင်းနှင့်ဝေးကွာနေသော်လည်းလူတစ် ဦး နှင့်စကားပြောခြင်းကကျွန်ုပ်အားပိတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ ငါအသက်ရှင်နေထိုင်စတင်ပြီအချိန်ပါပဲ သင်ယုံကြည်နိုင်သူအားသင်၏ပြaboutနာများကိုဖွင့်ပြရန်မည်သူမဆိုအကြံပေးလိုပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ့အမေကိုပြောသည်
porn စွဲလမ်းသည်သူ၏မိဘများ - နှင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုပြောပြတယ်